Wararka - Faa'iidooyinka iyo taxaddarrada loogu talagalay in lagu rakibo mitirka korantada oo leh tarjubaan hadda shaqeeya
Taxanaha Nooca Kale
Bannaanka Taxanaha Vacuum-ka
Taxanaha Vacuum Gudaha
Bannaanka SF6 Taxanaha Gaaska
Taxanaha Gaaska Gudaha SF6
Taxanaha Nooca Saliida
Taxanaha Nooca Qalalan
Taxanaha Nooca Dibedda
Taxanaha Nooca Gudaha
Taxanaha Nooca Silicon Rubber
Taxanaha Nooca dhoobada
Taxanaha Nooca Kiiska la Mideeyay
Taxanaha Nooca Hawada
Taxanaha Nooca Wareejinta otomaatiga ah
Taxanaha Nooca Iskudhinta
Faa'iidooyinka iyo taxaddarrada loogu talagalay rakibidda mitirka korontada ee leh qalabka wax lagu beddelo hadda
Maxay tahay in mitirka loo qalabeeyo qalabka wax lagu beddelo? Tani waa in laga fogaado in mitirka la gubo oo lacag la badbaadiyo. Marka la eego keydinta lacagta, sicirka mitirka yar ee hadda socda oo leh transformer ayaa ka hooseeya kan mitirka weyn ee hadda socda. Marka laga eego dhinaca nabadgelyada mitirka korantada, haddii qadarka hadda ku jira wareegga oo dhan uu ka sarreeyo heerka dulqaadka mitirka, markaa Wey dhaawici doontaa. Si looga fogaado gubida mitirka, waa lagama maarmaan in la rakibo tayo wanaagsan 11kv transformer hadda.
taxaddarrada rakibidda mitirka korontada waxaa ka mid ah qaybaha soo socda:
1. Hubi ka hor rakibaadda
Hubi mitirka ka hor intaadan rakibin, inta badan si aad u hubiso muuqaalka mitirka. Ka taxaddar markaad hubinayso inaad ka fogaato inaad iibsato alaab liita. Guud ahaan, mitirrada ay soo saaraan soo saarayaasha caadiga ahi waxay yeelan doonaan shaabad, gaar ahaan fiiro gaar ah u leh qodobkan, si loo arko in shaabaddu dhammaystiran tahay, iyo in lagu rakibi karo oo keliya marka laga gudbo imtixaanka.
2. Goobta rakibidda
Mitirka laguma dhejin si kadis ah irridda laga soo galo. Waxay sidoo kale leedahay shuruudo gaar ah oo loogu talagalay deegaanka ku hareeraysan. Waxaa ugufiican in lagu rakibo meel yara banaan. -40 digrii gudahood, huurka kama badnaan karo 85%, isla waqtigaas si toos ah ugama muuqan karo iftiinka qoraxda, dhererka waxaa lagu hayaa 1.8m.
3. Hawlgalka rakibidda
Markaad rakibayso mitirka, waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto shaxanka xargaha, isku xira fiilooyinka kor ku xusan mid mid, iskuxir kasta waa in lagu hagaajiyaa meesha, waxaad u baahan tahay inaad tijaabiso rakibidda ka dib, waadna isticmaali kartaa ka dib markaad ka gudubto imtixaanka.
Waqtiga boostada: Jul-17-2020
6 # Liujiang Road, Liushi Town, Wenzhou City, Gobolka Zhejiang, Shiinaha
Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Sannadka Cusub ee Shiinaha
Hambalyo 11kv & 33KV c ...
Bannaanka 33kV 35kV 36kV 1250A Vacuum Circu ...
Maxay Qiimuhu Ugu Kala Duwanyihiin?
Faa'iidooyinka iyo taxaddarrada ku rakibidda ...